खेलकुद Archives - jagritikhabar.com
काठमाडौं, १० मंसिर । मलेसियालाई ६ विकेटले पराजित गरेसँगै नेपालले आइसिसी टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटको सम्भावनालाई जिवितै राखेको छ । विश्वकपको एसिया छनोटअन्तर्गत शुक्रबार मलेसियाले दिएको ९२ रनको लक्ष्य नेपालले १८ ओभर दुई बलमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । नेपालको जितमा सीता रानामगरले...
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको चौंथो खेलमा आज शुक्रबार मलेसियाविरुद्ध खेल्दैछ । दुबईको आईसीसी एकेडेमी मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार सवा ११ बजे सुरु हुनेछ । ग्लोबल छनोटको सम्भावना कायमै राख्न नेपाललाई मलेसियाविरुद्ध जितको...
न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा, भारत समूह चरणबाटै बाहिरियो
काठमाडौं, २१ कात्तिक । न्युजिल्यान्ड आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार सुपर-१२ को समूह-२ मा अफगानिस्तानलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । न्युजिल्यान्डको यस जितसँगै उपाधी दाबेदार मानिएको भारत भने विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ...
आईपीएल फाइनलमा आज दिल्ली र मुम्बई भिड्दै, कसको पल्ला भारी ?
काठमाडौं , २५ कार्तिक । १३ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) को उपाधि भिडन्त आज राति पौने ८ बजे हुँदैछ । उपाधीका लागि पहिलो पटक आईपीएल फाइनलमा पुगेको दिल्ली क्यापिटल र चार पटकको उपाधी विजेता मुम्बई इन्डियन्स भिड्ने छन् । पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको...
एल क्लासिकोः रियलद्वारा बार्सिलोना पराजित
एजेन्सी, ९ कात्तिक । स्पेनिस फुटबल लिग ला लिगा अन्तर्गत ‘एल क्लासिको’मा रियल मड्रिडले जित हात पारेको छ । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा रियलले बार्सिलोनालाई ३-१ गोलले पराजित गरेको हो । रियलको जितमा खेलको ५ औं मिनेटमा फेडेरिको भाल्भर्दे, ६३ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत सर्जियो...
आईपीएल : राजस्थानमाथि हैदरावादको ८ विकेटको जित
काठमाडौँ, ७ कात्तिक । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल ) अन्तर्गत सनराइजर्स हैदरावादले राजस्थान रोयल्सलाई ८ विकेटले पराजित गरेको छ । राजस्थानले दिएको १ सय ५५ रनको लक्ष्य हैदराबादले १८ ओभर २ बलमा मात्र २ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । हैदराबादको जितमा मनिस पाण्डेले अविजित...
काठमाडौं, ५ कात्तिक । क्रिकेटप्रति बलिउडको विशेष लगाव छ। विश्वकै चर्चित घरेलु लिग इण्डियन प्रमियर लिग (आईपीएल)मा शाहरुख खानदेखि प्रिति जिन्टा सम्मको टिम खेलिरहेका छन्। क्रिकेटमा अब सलमान खानले पनि लगानी गरेका छन्। सलमानले श्रीलंकामा सुरु हुन लागेको क्रिकेट लिगका लागि टिम खरीद गरेका...
काठमाडौँ, १ कत्तिक । युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा कोलकत्ता नाइट राइडर्समाथि मुम्बई इन्डियन्सले सहज जित निकालेको छ। शेख जायद रंगशालामा शुक्रबार राति भएको खेलमा मुम्बईले ८ विकेटले जित निकालेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकत्ताले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर...
आईपीएलमा १०० खेल जित्ने धोनी पहिलो कप्तान
काठमाडौँ, २ असोज । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा महेन्द्र सिंह धोनी सबैभन्दा सफल कप्तान भएका हुन् । उनी विश्व क्रिकेटको बेस्ट फिनिशर मानिन्छन् । उनको आँकडाले यो कुरालाई स्पष्ट पार्दछ । उनको सबैभन्दा ठूलो रेकर्ड यो पनि हो कि, उनले आईपीएलमा २० ओभरमा...
हार्दिक बधाई ! नेपालले उचाल्यो साग फुटबलको उपाधी
काठमाडौं, २४ मङ्सिर । १३ औं दक्षिण एसियायी खेलकुद (साग) अन्तर्गतको अन्तिम भुटानविरुद्धको स्वर्ण पदकका लागि भएको अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानलाई पराजित गरेको छ । नेपालले भुटानलाई २-१ ले पराजित गरेको हो । योसँगै आयोजक नेपाललाई सागमा एउटा अर्को पदक हात पारेको छ ।...